Kubiza ini iBrompton? - Izimpendulo Ezihamba Phambili
Main > Izimpendulo Ezihamba Phambili > Idizayini yeBrompton - unganquma kanjani
Idizayini yeBrompton - unganquma kanjani
Kubiza ini iBrompton?
OkuyisisekeloIzindleko zeBromptonCishe ama-euro ayi-1200, uma u-oda okuningi okungeziwe, le ntengo ingaphindeka kabili kalula.06.21.2016
Izimoto zikagesi zihamba emigwaqweni yomhlaba njengoba sebebaningi abashayeli abafuna ukuhamba ngemvelo. Sawubona, nginguGlen nge-Minds Eye Design. Cishe bonke abakhiqizi bezimoto manje bakhiqiza imoto kagesi, kepha lokho akusho nje ukuthi izimoto namaloli.
Abakhiqizi bamabhayisikili nabo bethula izinhlobo zabo zikagesi zezimoto zabo, futhi eziningi ziphumile futhi zinemisha emisha nemiklamo. Nawa amathiphu ayi-15 amahle kakhulu i-Minds-Eye atholakele, elungele ukuthatha umgwaqo obheke phezulu noma phansi ngendlela ye- “e-bike”. Inombolo 15AbaseFrance beza ne-e-bike.
Abaklami be-iweech bathi i-e-bike yabo isebenzisa ubuhlakani bokuzenzela ukukuletha njalo lapho uya khona. Ihlaziya umzila wakho bese ikhetha ukuthi unikeza usizo olungakanani lukagesi. Ibeka izinga elilungile lokuthi ufeze inhloso yakho ngokuzikhandla okuncane.
Inohlaka lwe-aluminium olunemoto edonsa phakathi naphakathi namasondo angama-intshi angu-24 futhi isisindo sayo singaphansi kwamakhilogremu angama-40 Ibhethri lingama-volts angama-36, cishe ama-watts angama-500. I-iweech inesitayela esibushelelezi, esicwengekile futhi ibukeka yakhelwe kahle kakhulu.
Inombolo 14Awonke ama-e-bikes angama-250 e-limited limited athengisiwe, kepha inkampani ye-Specialised ithi iTurbo Creo SL ichaza kabusha ukusebenza kwamabhayisikili e-e-road. Ibhayisikili le-Special Edition linohlaka lwekhabhoni nemfoloko futhi, ngamasentimitha angaphezulu nje kwama-26, ukwakhiwa okulula kakhulu kweTurbo CreoSL. Ine-derailleur ekhethekile engasindi ngemuva namasondo.
Imoto ingaletha ama-watts afinyelela ku-240 futhi ingahamba ibanga eliphelele elingamamayela ayi-120 ngamanwebuli we-range. Kuyibhayisikili impela, ubungeke usho? Inombolo 13 Manje enye into esezingeni eliphansi emhlabeni iyabiza, ibhayisikili le-e-cargo elinamasondo angama-intshi angama-20. Esinye sezibonelo ezihamba phambili zalesi sigaba samabhayisikili asafufusa yinkampani yakwaTern, eyaqala ukwaziwa ngomugqa wayo odumile wamabhayisikili amancane okusonga, okubili okunyakaziswayo kanye nogesi.
kona rove al ukubuyekeza
Ibhayisikili lezimpahla le-HSD ngezinhlobo ezi-3 ezahlukahlukene likhonjisiwe ku-Eurobike 2019. Ngesisindo esiphelele esingu-374 lbs. kanye ne-Xtra enkulu ye-Atlas H rack, ithwala ukudla kwesonto.
Ingagoqwa ngokuqinile futhi ingama ime mpo. Inesisindo esingaphansi kwamakhilogremu angama-60 kuphela. Inombolo 12 Ngasemuva ngemuva kwe-e-bike yabagibeli ka-Gocycle 'esonga ngokushesha', i-GX edumile, basanda kumemezela i-GXi, ethatha okungcono kakhulu kwe-G3 yabo yangaphambilini futhi ibangeze kwi-semi yabo Uhlaka lwebhayisikili oluthambile.
I-GX-Line ingagoqwa ngemizuzwana eyi-10 futhi inebhethri elingashintshwa. IGXi inemoto eyihabhu engaphambili engama-500 watt futhi ingafinyelela ku-32 km / h ngejubane elingu-3. IGocycle ithi ingafinyelela kumamayela angama-80 ngecala elilodwa.
Inombolo 11 Kuthiwani Uma Ama-E-Bikes Engathola Indlela Engathi Sína 'Yezempilo'? Yebo, inkampani yaseRomania isebenza ukufakazela ukuthi ama-e-bikes athandwayo asenikeza abagibeli ukuzivocavoca okuhle. Ibhayisikili lisebenzisa inhlanganisela yohlelo lokusebenza lwefoni, isilawuli sokushaya kwenhliziyo nekhompyutha yebhayisikili ukusetha usizo lwephedali. Umshayeli weXmera angawucisha umsebenzi wokuqeqesha ahambe ngezinyawo.
IXmera manje isise-Indiegogo futhi inikela ngezinketho eziningi zokusebenza. Ijubane eliphezulu lingafika kumamayela ayi-16 ngehora futhi linebanga elingaba ngamakhilomitha angama-60. Uma udinga ukuphatha ibhayisikili elengeziwe noma ezimbili ngemuva kwebhayisikili lakho, nansi indlela elula, elula yokwenza.
Ungaxhuma i-Exozox rack rack. Yasungulwa ePoland futhi ithengiswa kwi-Intanethi. Inezingxenye ezimbili, indawo yokubeka imithwalo ejwayelekile engahlala unomphela ebhayisekilini, nengxenye yesibili enezintaba zamasondo angaphambili ezinganamathiselwa ebhayisikili ukuze amabhayisikili alandelayo asuswe.
Intambo ye-bungee ibamba amanye amabhayisikili endaweni lapho begibela. Inombolo 10 Umkhankaso we-Indiegogo uyaqhubeka wokuxhasa ukukhiqizwa kwe-e-bike engajwayelekile evela enkampanini yaseSweden i-ELBI, eyaziwa njengebhayisikili le-'Easy Life '. Ukushayela ibhande kusiza ukushayela ibhayisikili elingamasentimitha angama-20 ngohlaka lonke lwe-aluminium.
Ibhayisikili linebhethri lalo ngqo ngaphansi kwebhasikidi yesibambo sangaphambili. Imoto yehabhu itholakala esondweni langaphambili futhi ifakwe inzwa ye-torque enama-watts angama-250 noma inzwa ye-cadence ene-500 watt Engine etholakalayo. Ungakwazi futhi uku-oda ibhayisikili ngaphandle kwe-elekthronikhi.
Bheka ikhasi le-Indiegogo, mhlawumbe ufuna nje ukutshala imali kuleli bhayisikili elihlukile, i-e-bike noma cha i-e-bike. Inombolo 9 Uma uthi nhlá, le e-bike ingadlula njengesithuthuthu sezemidlalo esipholile osibona emigwaqweni nsuku zonke. Oda kusengaphambilini i-Rocket engu-100 elinganiselwe enejubane eliphezulu elicishe libe yi-50 MPH futhi ibanga elifinyelela kumamayela ayi-120 liyaqhubeka.
Inemoto enamandla ka-16 kW enamandla angu-5 kW okukhiphayo okuqhubekayo, ibhethri elingama-52 V lithium elinamandla angu-6.6 kWh. Inamasondo angama-intshi angu-17 kanti ibhayisikili linesisindo esingamakhilogremu angama-265.
Manje usungabekelela i-LimitedEdition 100 ngokukhokha idiphozi. Inombolo 8 Wake wawabona lawomabhayisikili amakhulu amathathu amasondo athandwa ngabantu abadala? Yebo banikela ngozinzo oluningi uma kuqhathaniswa namabhayisikili amasondo ama-2, kepha uma uhamba ngejubane eliphakeme futhi wenze ithuba bangakwazi ukuqhubekela phambili. I-Italy yakhelwe ibhayisikili iTris yehluke kakhulu endleleni yayo.
Inamasondo angaphambili ama-2 abhekene.Ibhayisikili lincane ukuze lingacindezeli umgibeli futhi kube lula ukuliqhuba. UTris unamamodeli ama-3, ama-2 anehabhu langemuva leZehus emotweni, elesithathu alinagesi. Ingahamba cishe i-15 MPH futhi ububanzi bayo buzungeze amamayela angama-20.
Inombolo 7 Uma ufuna i-adventure esheshayo ye-off-road futhi usukulungele, sika umthethosivivinywa bese uhlola isondo le-Hi PowerCycles '27.5+ Scout Pro. Inenzwa ye-torque ehlakaniphile futhi imoto ihambisa amandla afinyelela kuma-watts angu-3000 ngejubane eliphezulu lika-45 mph nobubanzi obufinyelela kumamayela ayi-160 kumodi ye-Eco.
Ngingu-Allie futhi yisikhathi se-Minds Eye Trivia. Uma ubheka nje lezi zithombe, uyazi ukuthi ziyini futhi zivelaphi? Shiya impendulo efanele noma ukuqagela kwakho okuhle esigabeni sokuphawula esingezansi, inombolo 6 Inkampani yase-Ukraine iDelfast ithuthukise ama-e-bikes amaningi asebenzayo ebhizinisini layo futhi manje isimemezele ukuvuselelwa kumodeli yayo esheshayo. ITop 2.0 inejubane eliphezulu elilingana nelangaphambili, kodwa inemoto enamandla kakhulu, eyi-5000 kW motor wheel hub motor yangemuva.
Ibhethri lalo elikhulu linebanga elifinyelela kumamayela angama-236 ngecala elilodwa. Inombolo 5I-e-bike entsha yokungena esezingeni eliphezulu yiStark Drive Torque Max. Ibhayisikili liyimodeli yakamuva evela enkampanini yakwa-e-bike iStark, eziqhayisa ngama-e-bikes ashibhile kakhulu.
Inkampani yaseSweden ithuthukisa ibhayisikili layo elisha i-'Max 'ngemoto egcwele engu-1000 watt Bafang UltraMax efinyelela ku-60 km / h ngosizo lwe-pedal kanye nebanga elifinyelela ku-100 km. Umkhankaso we-Indiegogo wethulelwe amabhayisikili akwaMax namanye amabili abiza kancane. UStark uphinde anikele ngeStark City Bike yayo ngemali engango- $ 399.
Inombolo 4 Inkampani ye-Electra Bike ivela kulo nyaka ngohlobo olulinganiselwe lwama-e-bikes abo ochungechunge lwe- 'Go'. s 'I-Cafe Moto Go!' ephefumulelwe ukuvuna. Ibhayisikili elijabulisayo lingumklamo olula okhumbuza izinsuku zezithuthuthu zeCafe Racer zama-60s.
Inemoto yeBosch Performance Speed, ijubane elisekelwayo elingu-45 km / h namabhuleki e-hydraulic disc, kanye nebhande le-Gates carbon kanye nehabhu eguquguqukayo yangemuva ye-Enviolo. Ukuthinta okuhle kufaka ibhethri elingu-500 Wh, isihlalo sesikhumba seBrooks B17, amathayi angama-intshi angama-26 kanye nokhanyiso olukhulu, iWilier Cento10 Hybrid isisindo esingamakhilogremu angama-23. Ibhayisikili likhombisa ifa lalo elisezingeni eliphezulu lomjaho wase-Italiya ngokulingana okungapheli nokuqedwa.
Inemoto encane yehabhu engemuva ye-E-Bike Motion nohlaka lwekhabhoni. Ibhayisikili lisha ebangeni le-Wilier futhi linosizo lwe-pedal. Kube ngumnqobi we-Euro-bike2019 Show Award.
Inombolo 2 Inkampani yaseCanada, i-eProdigy inezinhlobonhlobo zama-e-bikes anebanga lentengo ebanzi. Okunye okuthakazelisa kakhulu ibhayisikili labo eligoqwayo elingamasentimitha angama-20, iFairweather. Ithathwa njengeyokuqala futhi nje engasindi, egoqekayo i-carbon fiber e-bike ene-medium drive kanye neGates Carbon Belt Drive.
Kokubili ukuphehla kwesithupha nokuhambisa ngezinyawo ngomshini wobakaki ongezansi obekwe nge-36V 500W. Nayi enye yetreyila yebhayisikili eligoqekayo elifanele ukushiwo ngoba ilusizo kakhulu. Inkampani yaseGerman iTrenux isimemezele okokuqala ngonyaka odlule manje isiyabuyekezwa futhi iqala ukukhiqizwa ngezimali kuKickstarter kungekudala.
I-trailer isebenza ngokujwayelekile uma ilayishiwe, kodwa inggoqwa phezu kwesondo elingemuva lebhayisikili lakho uma lingenalutho. Inombolo eyodwa, okokugcina kodwa okuncane, yi-e-bike e-foldable ka-Brompton Electric. Ngama-lbs angama-36 no-2/3 kuphela ubukhulu bamanye amabhayisikili kagesi agoqekayo, kulula ukuwaphatha.
Ibhayisikili elihlakaniphile liyatholakala noma ngamagiya amabili noma ayisithupha anebhethri elincane elikhiphekayo esikhwameni elingahambisa ibhayisikili lifike kumamayela angama-45 ngosizo lwephedali. Ungayithenga isilungele ukwenziwa noma uzi-oda ngokwakho ngezinketho ezikhethwe ngesandla. Yebo, lolu uhlu lwethu lwama-e-bikes amasha emakethe njengamanje.
Intuthuko entsha emhlabeni yama-e-bikes ivela nsuku zonke futhi iqhubeka iba ngcono, ngakho-ke hlala ubukele ukuhamba okukhangayo. Sanibonani nonke! Uma uthanda le ndatshana, sicela ushiye amazwana mayelana nokuthi yini oyithole ithakazelisa kakhulu nokuthi kungani. Ukuze waziswe lapho kuthunyelwa i-athikili entsha, chofoza isithonjana sensimbi ezansi kwesokudla senkinobho ethi Bhalisa.
Siyabonga ngokubona i-Mind's Eye Design.
Linzima kangakanani ibhayisikili eligoqwayo?
Ngenxa yabo bonke ababhalisile, wonke umuntu uyithokozela kakhulu i-athikili shop futhi uma ubuka le ndatshana futhi ungakabhalisi kuyo, cabanga ukubhalisa ngoba isiza impela isiteshi futhi uyazi ukuthi ngiyakujabulela ukulalela konke ukuphawula kwakho no-um futhi Impendulo, nesizathu engikusona, ewu, ukuhlala kulesi sihloko ngeBumpton kungenxa yokuthi ngikholelwa ngobuqotho ukuthi leli bhayisikili liguqula indlela owenza ngayo imisebenzi yansuku zonke ngebhayisikili ngakho-ke sizokuhlukanisa kube izigaba ezintathu ezihlukene ezihlanganisa okuthile okufana nalokhu izici ezingokoqobo zokuba nebhayisikili nezici ezisebenzayo zokuba ne-abromptonthe. n sizobheka amabhayisikili agoqekayo futhi ngokujwayelekile ukuthi anjani, ngikholwa kanjani ukuthi awusizo kakhulu kunamabhayisikili ajwayelekile futhi angakuvumela ukuthi uwasebenzise ngaphezu kwebhayisikili elijwayelekile bese ekugcineni sizobheka ukuthi yini I-Prompter isebenza kahle kakhulu nokuthi kungani sicabanga ukuthi u-bumper muhle kakhulu nokuthi kungani ilingana nendlela yethu yokuphila ukwedlula noma iyiphi enye indiza esiyifundile imayelana nokusebenzisa amabhayisikili njengendlela yokuhamba.
Kusukela ekuqhubekeni kweToband, empeleni besisenza izindatshana zokuthi siwasebenzisa kanjani amabhayisikili kusukela ngoJuni nyakenye, futhi okuningi kwalokho manje kugxile kakhulu ekukhuthazeni ngoba sisebenzisa iBrompton kakhulu kunamanye amabhayisikili ethu enginawo okutholakele ukuthi le Brompton ikhawula wonke lawa mabhokisi kakhulu kunanoma iliphi elinye ibhayisikili engake ngaba nalo yingakho ngiyisebenzisa yingakho ngisebenzisa le Brompton kakhulu uma ngiqhathanisa namanye amabhayisikili ngoba njengoba ngithe thikha wonke lawa mabhokisi owacabangayo lapho uyothenga. Zinebhulokhi langaphambili ngaphambili elenzelwe ukubamba amaphakethe ukuze kube lula ukugqoka nokusuka. Ucabanga ngeBrompton maqondana nezikhwama ezahlukahlukene ongazithola, uyazi ukuthi zihlukile.
Amaphakethe anokusetshenziswa okuhlukile okuhambisana nabantu abaningi abehlukene futhi uyazi ukuthi ungakhetha ukuthi yisiphi isikhwama onaso, ngakho-ke kuyindlela yendlela i-prompt evame ukusethwa ngayo maqondana nokuthenga, ngakho-ke lapho siyothenga ngingalingana nezinto eziningi kuyo Uma nje isebenza kahle impela, ungayimisa kanjani, kunjalo, enye into enhle ngeBrockton ukuthi incane kakhulu, kepha uma iqhubeka ivuleka ibe ibhayisikili elilinganiselwe ngokuphelele futhi uyazi ukuthi ekuqaleni ucabanga Benginokungabaza okuncane, mayelana nokuthenga enye yalezi Bromptons, futhi empeleni bekungalunga, yebo, kepha le Brompton ingena ezikhaleni ezincane uma yenza i-fol ided isongwe kakhulu futhi lokho kungenye yezinto ezinhle kakhulu ngayo kepha uma uyivula kufana nebhayisikili elijwayelekile, igibela njengebhayisikili elijwayelekile unenye yalezi futhi unazo zonke izinzuzo zokuthi iyagoqeka futhi ungahamba nayo ngisho nasezindaweni lapho ungeke uthathe okujwayelekile ibhayisikili. Enye into enhle ngebhokisi yinto yokulungisa izinto, uyazi ukuthi siyithuthukisile le Brompton yabe siyidinga futhi yenza kube lula kithina, kepha ibhayisikili lesisekelo lihle impela, konke lokho kuthuthukiswa okuncane engikwenzayo yenzelwe ukusetshenziswa kalula, njengesibambi semithwalo esivikela ifreyimu ukuvikela ifoni kancane um, uyazi lawa ma-cleaner hub wokuhlanza umzamo wokuhlanza kulezo zindawo okunzima ukufinyelela kuzo, kepha njengoba ngishilo, asikho ' t kushintshe noma yini mayelana no-gearbox noma yini eyimishini ebhayisikili. Ibhayisikili elisebenziseka kakhulu engake ngabanalo.
Amabhuleki alula ukusevisa ukushintsha ama-overbrake pads, sengizoshintsha uchungechunge futhi lokhu kuzoba ngumsebenzi olula kakhulu futhi ziningi izindatshana ze-YouTube ku-YouTube ezizokusiza uchaze ukuthi kumayelana nokwenza lezi zinto futhi ngolwazi oluncane oluyisisekelo kuzoba lula impela ukulungisa igiya kuyo nginamagiya amathathu kuphela kule brompton, lokho bekungenye into ebengikhathazekile ngayo kepha empeleni okhiye bayakhazimula, balula kakhulu futhi kuncane okungahambi kahle yingakho ngicabanga ukuthi ngiyasithanda yingakho ngithanda lesi sikebhe kakhulu, ngoba kuncane kakhulu okungonakala, ngoba silula ngokwezinto zemishini futhi ekugcineni kube lula ngokuthenga okungokoqobo Ukukhiya leli bhayisikili kungenye yezinto zami ezimbi kakhulu ngokuphuma lapho ngihamba ngebhayisikili lami lapho siyothenga noma kufanele ngiye endaweni ethile lapha lapho kufanele ngishiye ibhayisikili ngaphandle ngiyesaba ukuthi lizokwebiwa abantu bazodlala ngayo khululani izinto khululani ibhuleki Izintambo zithukulula izihlalo zintshontsha ibhayisikili zintshontsha ibhayisikili uyazi kwesinye isikhathi ufika endaweni yokukhiya ibhayisikili epaki ngeke ngiwathathe amabhayisikili ebhayisikili lami ngoba angasuswa ngokushesha angifuni ukuzivalela ngokwehlukana ngicabanga ukuthi I-brompton ilula kakhulu ngoba ngiyayigoqa nje bese ngihamba nayo ngiyazi ukuthi iphephile angidingi ukukhathazeka isikhashana kude nebhayisikili bheka futhi futhi ngiku muh kuhlala njalo ukuze wazi iqiniso lokuthi lincane kakhulu yingxenye engcono kimi maqondana nokusebenziseka kanye ne-shoppinguh noma ngiya kwenye indawo bese ekugcineni ngifingqa ukuthi kungani? Sicabanga ukuthi leli bhayisikili lihle kakhulu manje, kusobala ukuthi awusoze waba nebhayisikili elingenza yonke into ngokuphelele, ngakho-ke uyazi leli bhayisikili yize lisebenza kahle kithina ngoba silisebenzisa emigwaqeni esisebenzisa ezindleleni zebhayisikili umhlaba we-kana ngokujwayelekile, yonke leyo migwaqo yemigwaqo mihle impela ibushelelezi iyonke ngaphandle kwezimbotshana zemigwaqo kodwa uyazi ukuthi ukususa lelo bhayisikili emgwaqeni cishe ngeke kulingane nebhayisikili lasentabeni elinamasondo angama-intshi angama-29 cishe ngeke ngikwenze lokho ngaleli bhayisikili, kodwa njengebhayisikili elijwayelekile lansuku zonke ngokusetshenziswa ukusuka kwelinye uye ebhasini emgwaqweni ezindleleni zebhayisikili elisetshenziswa emseleni leli bhayisikili liwina ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokucela, ngakho-ke uma kunjalo ibhayisikili elilodwa lelo Angizisoli, ngokuthi ngiyazisola ngokuthi ngibe namabhayisikili amaningi esikhathini esedlule futhi emva kwezinyanga ezimbalwa ngihlala ngifika lapho bese ngiyazi ngikudle, ngifisa lokhu noma ngifisa ukuthi ngalo mfana ngokungangabazi angizange ube nalo muzwa nakancane futhi uma kukhona okudlule ebengikulindele, ngaphandle kokungabaza, uyazi, Ngikuthola kuyinto ewusizo kakhulu enginayo njengamanje kepha njengoba ngishilo, akuyona nje iqiniso lokuthi uyasebenza futhi uyakwazi ukuyigoqa incane, kepha kuyinjabulo yangempela ukugibela futhi ngicabanga ukuthi kukhipha okungaphakathi kwakho ingane ngoba isisindo sithwala amasondo amancane, ikukhipha ikubuyisele esikhathini lapho okungenzeka ukuthi wawunebhayisikili elincane le-BMX noma lokho nje okubuyisa izinkumbulo futhi kuyinjabulo enkulu ukugibela futhi ufuna izizathu zokuphuma ngayo. Sengiphetha, ngicabanga ukuthi leli bhayisekili ngokungangabazeki ibhayisikili elihle kunabo bonke engake ngaba nabo futhi ngeke ngithole elinye ibhayisikili manje ngoba angidingi ibhayisikili elilodwa vo ukusuka kwelinye liye ebhandeni engithanda ukugibela kulo futhi nijabula. Leli ibhayisikili elifanele kimi engikusebenzisayo futhi uyazi ukuthi u-Onebite akasoze enza konke njengoba besishilo ngaphambili, kepha iBrompton ekithi uqobo iyinto elandelayo engiyenzayo - bebehlala bekwenza lokho Guys uma ubuthandile i-athikili, sinikeze isithupha bese ubhalise futhi yebo ngiyabonga kuwo wonke umuntu obhalisile kuze kube manje futhi ngizokubamba olandelayo
Yimaphi amathayi eBrompton?
ISchwalbe Marathon Racer Tanwall yethulwe okokuqala ngomhlakaI-BromptonI-Explore yethulwe futhi manje isiyatholakala njengesibuyekezo kuwo wonke umuntuI-Brompton-Amabhayisikili ayatholakala. Lokhuamathayiinezici ezihlaba umxhwele zokushayela futhi ilungele zonke izinto ozizamayo.
Ngishaywa noma ngidinga ukususa isondo langemuva ukuze ngikwazi ukufinyelela esondweni elingemuva lebhayisikili Nakhu konke odinga ukukwazi ukususa nokufaka kabusha isondo elingemuva leBrompton Khipha isiqeshana kufreyimu yangemuva bese uligoqa ibhayisikili ngaphansi inothi elijiyile emhlane lithukulule futhi uqaqe isihlungi sesilinda unebhayisikili elinejubane ezintathu noma isithupha isivinini senkomba yegiya silenga sikhululekile ekugcineni kwe-asi futhi kufanele sikhululwe futhi sisuswe kuhabhu susa ingalo elayishwe entwasahlobo esiphambanweni bese uphakamisa iketango ngokulandelayo ususe umcindezeli wamaketanga ukwenza lokhu, sebenzisa ukhiye wokukhiya u-15mm 15 ukhulule isivalo sesivinini esingu-3 noma 6 Le yinadi ekhethekile futhi ngejubane elingu-1 no-2 iyinothi elijwayelekile lesondo. Susa isondo ukuze isondo likwazi ukudlula abashayeli bamabhuleki lapho lisuswa. Ukuze wenze lokhu, susa ikepisi lothuli bese ucindezela i-valve.
Sebenzisa isikhululi esingu-15 millimeter ukususa i-asi, iqinise ngokwanele ukuze okokuwasha kukhululeke kupuleti ye-eksisi ukuze ikhululeke, uthintithe ngobumnene iketango ususe i-sprocket bese ususa isondo Manje usungashintsha amasondo akho, ulungise amathayi, ushintshe amasondo angemuva noma uzulazule okunzima ukufinyeleleka Nakekela izingxenye kohlaka lwangemuva Phinda uhlanganise isondo langemuva Qiniseka ukuthi isondo alikho emoyeni ngaphambi kokufaka isondo langemuva Yehlisa i-ekseli ku-dropout Qiniseka ukuthi uhlangothi oluyisicaba lwe-eksisi iqondaniswe nepuleti ye-ekseli, bese ugijimisa uchungechunge nge-sprocket yangemuva. Beka ama-washer okhiye ne-nut kuwo ukuze phezulu kubheke phezulu. Qinisa amantongomane esondo ngokuqinile ku-idler pulley engaguquki ngeketanga Uma unebhayisikili elinejubane ezimbili noma eziyisithupha, i-idler pulley kufanele ihlale phakathi kwe-actuator Faka ama-washer bese uqinisa isikulufu lesi sikulufu kufanele siboshwe ngesandla ngokuqinile, ungasebenzisi amandla adlulele Phinda ufake iketango lenkomba, donsela isiphikisi seChain ngaphansi ukuze ubambe uchungechunge njengoba kukhonjisiwe, ukulungiswa komgqomo nochungechunge lwenkomba yamagiya akho kungadinga ukusethwa kabusha ngemuva kwale nqubo.
Sicela ubuke lo mbhalo ukwenza lokhu
Yiliphi ibhayisikili eligoqeka kakhulu?
Ekuqaleni kuka-2017, nePhakheji evela ku-Bike Friday, lokho kuzofika kulaba baphuphayoelula kakhuluIbhayisikili eligoqiwe emhlabeni. Ama-6.8 kilograms aphansi ngokweqile, ngisho nakwimifino engu-16-intshi. Ukuqhathanisa: NgeBrompton ethandwayo, isisindo singancishiswa sibe ngama-9.3 kilogram ngesakhiwo sangemuva se-titanium esibizayo.09.15.2016
Kukhulu kanjani ibhayisikili eligoqwayo?
Usayizi we-impeller. Osayizi abakhulu bamabhayisikili asongwayo baphakathi kwamasentimitha ayi-14 kuye kwangama-24. Kukhona namabhayisikili agoqekayo anamasondo amasondo amayintshi ayi-12 nangaphansi, kanye nama-intshi angama-26 nangu-28.
Kubiza malini ukubheja ibhayisikili elihle?
Aizindleko ezinhle zokugoqa ibhayisikiliAma-euro angama-500 phezulu! Ngakho-ke, wonke umuntu kufanele azazise kahle ngaphambi kokuthenga okubalulekile nokuthi ungonga kuphi ama-euro ambalwa uma kunesidingo.
Ibhayisikili elijwayelekile lokugoqa linesisindo esingaba ngu-10-15 kg ngakho-ke lingaphakathi kwemikhawulo.
Uyini umehluko phakathi kwebhayisikili eligoqwayo nebhayisikili eligoqwayo?
AIbhayisikili eligoqiweokuhlukile kwanamuhla okungasongwa kaningana. Ibhayisikili eligoqiwe lakudala linendlela yokusonga maphakathi nohlaka, lapho iIbhayisikili eligoqiweisivele inendlela ethe xaxa yokusonga.04.07.2017
Yikuphi ukusonga okuhle?
IkakhulukaziIbhayisikili eligoqiwekomkhiqizo weTern usikwe kahle kahleKulungilekusuka. Ngenxa yesisindo sabo esincane, amabhayisikili we-Tern asongekile akhethekileKulungileefanelekile ukusetshenziswa kwansuku zonke. Ukukhethwa kokushintshwa kwamagiya namabhuleki kungakholisa.
Linzima kangakanani ibhayisikili eligoqwayo le-e-bike?
Thola elulaINGABE-Ibhayisikili-Umugqa wokushaya izandla, ungathola amamodeli anesisindo esingama-19 kilograms noma ngaphezulu. Amanye amamodeli anesisindo esifinyelela kuma-25 kg, kepha lapha impahla nosayizi yizici ezinqumayo, phakathi kwezinye izinto.
amabhayisikili asetshenzisiwe athengiswayo
Yini okudingeka uyazi ngeBrompton Design Handbook?
IBrompton Design Handbook | 7 | Ngaphambi kokuqala ukwakhiwa, iWolfdene Design Review Committee (WDRC) izohlola izinhlelo zokwakha nokwakha izingadi ukuqinisekisa ukuthi ziyahambisana nama-Design Standards akhonjwe ku-Brompton Design Handbook. Uhlu Lokuhlola Lokuvunywa Kokuklanywa kufanele luhanjiswe kanye nezinhlelo zaphansi kanye nokuphakanyiswa kwe-WDRC.
Ivelaphi ibhayisikili lokugoqa iBrompton?
Ukuqala edolobheni lethu lasekhaya eLondon, sethule umkhankaso wethu we-Campaign for Movement ukushayela ushintsho, ukuma futhi senze amadolobha ethu ajabule futhi abe nezindawo ezinempilo zokuhlala. Amabhayisikili asongwayo aseBrompton enziwe ngezandla eLondon kusukela ngo-1975. Udinga usizo lokuthola umkhiqizo ofanele? Unombuzo mayelana nebhayisikili lakho leBrompton? Ithimba lethu lilapha ukuzosiza.
Usebenzisa hlobo luni lweKhadi Lokutholwa uBrompton?
Idizayini yekhadi lomamukeli le-R2 eliguqukayo likaBrompton belilokhu lihola embonini ngokoqobo. Isici sayo sefomu elincane ngokuhlukile sivumela ukuguquguquka okungavamile nokufakwa kumapaneli acishe abe ngosayizi.